टी-२० विश्वकप : श्रीलंकाले बंगलादेशलाई हरायो « Yoho Khabar
मंसिर २१, २०७८ मंगलबार / Tue Dec 7, 2021
टी-२० विश्वकप : श्रीलंकाले बंगलादेशलाई हरायो
काठमाडौँ – ईसीसी टी-२० विश्व कप क्रिकेटको सुपर-१२ अन्तर्गत आइतबार भएको पहिलो खेलमा श्रीलंकाले बंगलादेशलाई पराजित गरेको छ । यूएईको सारजाहमा भएको खेलमा श्रीलंकाले बंगलादेशमाथि ५ विकेटको सहज जित निकालेको हो ।
टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको बंगलादेशले दिएको १ सय ७२ रनको लक्ष्य श्रीलंकाले १८ ओभर ५ बलमा ५ विकेट गुमाएर पूरा गर्‍यो । श्रीलंकाका लागि चारिथ असलन्काले अविजित रहँदै सर्वाधिक ८० रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले । भानुका राजपाक्षेले पनि ५२ रनको अर्धशतकीय इनिङ खेल्दा पाथुम निशन्काले २४ रन बनाएका थिए ।
बलिङतर्फ बंगलादेशका नासुम अहमेद र शकिब अल हसनले २/२ विकेट लिए । यसअघि पहिलो इनिङमा ब्याटिङ गरेको बंगलादेशले निर्धारित २० ओभरमा ४ विकेट गुमाएर १ सय ७१ रन बनाएको थियो । बंगलादेशका मोहमद नाइमले ६२ रनको अर्धशतकीय इनिङ खेल्दा मुस्फिकर रहिमले अविजित ५२ रन बनाएका थिए ।
लिटोन दासले १६, शकिब अल हसनले १० तथा कप्तान महमुद उल्लाहले अविजित १० रन बनाए । श्रीलंकाका चामिका करुनारत्ने, बेनुरा फर्नान्डो र लहिरु कुमाराले १र१ विकेट लिए ।
यस जितसँगै समूह १ को श्रीलंकाले २ अंक जोडेको छ । श्रीलंका समूहको दोस्रो स्थानमा रहेको छ । बंगलादेश पाँचौं स्थानमा छ ।
साझा उम्मेदवारीको भोलिसम्म निर्णय गर्छौं : पौडेल
‘ओमिक्रोन’ के हो ? यसबाट मृत्यु हुने सम्भावना कति छ ? कसरी सुरक्षित हुने ?
चाक्सीबारीको रस्साकस्सीले प्रकाशमान र शेखरमा कुरा अड्कियो, रामचन्द्र–शशांकको त्याग !(भिडियोसहित)
चिसोमा किन बढ्छ वायु प्रदूषण ?
शशांकले छाडे कांग्रेस सभापतिको दाबी
काठमाडौँ – नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले भोलीसाँझसम्म पार्टीको १४ औं महाधिवेशनका लागि साझा उम्मेदवार तय गर्ने निर्णय गरेको छ । आज चाक्सीबारीस्थित
५० गुणा परिवर्तन भएर आएको ओमिक्रोन भेरीयन्ट नेपालमा भित्रियो भने धान्न सकिंदैन
राप्रपाको महामन्त्रीमा कुन्ती निर्वाचित, रेखाको हार
कमल थापा समूहको निष्कर्ष : ज्ञानेन्द्र शाहलाई बोकेर नहिँड्ने
भीम रावललाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ, माधवकुमारसँग अब एकता असम्भव